Shiinaha 90CM*6 Lakabyada Shabakadda Qalalan Oo Lagu Go'i Karo Warshada Qalajinta Albaabkayaga iyo alaab-qeybiyeyaal | Virex
90CM*6 Lakabyada Shabakadda Qalalan ee Lagu Go'i Karo Qalajinta Albaabkayada
Shabagga qallalan ee VIREX wuxuu ka samaysan yahay naylon xuduuduna waa bir. Shabakaddan qallalan waa la guuri karaa, waana la rakibay oo laalaabtay. Boosku waa weyn yahay, nambarka lakabka ayaa ku kicin kara waxyaabo badan.
Walaxda ilaalinta deegaanka: walxo aan sun biyuhu lahayn oo dhar ah, giraanta xadhigga birta ah ee ku dhex dhisan, taageero adag.
Naqshad la laabi karo: mesh qalalan oo si buuxda loo furay, awood weyn. Waxay isku laabtaa baakidh yar oo kaydin fudud.
Mesh la neefsan karo: shabagyada neefsashada ayaa wareegta hawada oo si degdeg ah u engejiya alaabta. Naqshad qalajiyaha qalajiyaha, oo aad kuugu habboon inaad alaabta haysato. Naqshadaynta gaarka ah waxay kuu sahlaysaa inaad geliso ama ka soo saarto waxaad rabto inaad qallajiso, sidoo kale waxay ka hortagtaa in dabayshu ay baxdo.
Faraanti la laadlaadsan: Saqafka laadlaadku wuxuu bixiyaa hab ku habboon oo lagu qallajin karo waxaana lagu dhejin karaa meel kasta oo aad rabto. Sida bannaanka, saqafka, teendhada wax lagu beero, garaashka, armaajooyinka, iwm.
Isticmaalka: Ku habboon dhammaan noocyada dhirta, sida dhirta, dhirta, ubaxa iyo wixii la mid ah.
1.Qalabka：Mesh naylon, jir bir ah, iyo walxaha sare ee biyuhu ka celinayaan.
2.Nooca：La go'i karo oo aan la go'i karin；Sibooyin leh iyo la'aan.
4.Shabaq qallalan oo ay ku jiraan: 1pc shabag qalalan, 1pc “S” bir, 1pc bac lagu qaado.
Magaca Alaabta Shabakadda qalalan ee la go'i karo
Isticmaalka Banaanka & Gudaha
Shabagga nylon iyo jir bir ah
Cabbirrada Dhexroorka 90 cm; 2/4/6/8 lakab
Midabka Midabka madow
Xirmo Sanduuqa kartoonka
Waxaan bixin karnaa muunad, kaliya waxaad u baahan tahay inaad bixiso xamuulka.
Waxaan aqbali karnaa adeegga gaarka ah: midabka, astaanta, baakadaha, iwm.
Waxaan nahay warshad bixisa qiimaha warshaddii hore oo aqbal dalabaadka yaryar.
Q1: Waa maxay tirada ugu yar?
A: Hal kartoon.
Q2: Ma ku daabacan karaa astaanta shabagga engegan?
J: Dabcan. Waxaad bixin kartaa Logo-ka waxaanan kuu samayn doonaa sawirka saamaynta.
Q3: Waa maxay shuruudaha xirxirida?
A: Guud ahaan, alaabtayada waxaan ku xirnaa sanduuqa kartoonada. Xidhmo la habeeyey ayaa diyaar ah
Hore: Koritaanka Xirmooyinka Iftiinka Dhameystiran ee Nidaamka Beeritaanka Guriga cagaaran ee Hydroponics
Xiga: 40*40*120 CM Kori Teendhada Dhaqanka Hydroponic Geedka cagaaran ee Gudaha
Shabakadda Qalalan ee Mesh-Hyrooponic Rack Qalajinta